Shola Shoretire oo Riyadiisa Rumoowday kadib Safashadiisii Xalay.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Shola Shoretire oo Riyadiisa Rumoowday kadib Safashadiisii Xalay.
Xiddiga qadka dhexe ayaa noqday xiddigihii ugu dambeeyay ee akadeemiyadeed ee ka qalin jabiya heerka sare ee Old Trafford, waana kii ugu dambeeyay ee isbedel muuqda oo la arkay sanadihii la soo dhaafay
Marcus Rashford ayaa abaalmarin ku muteystay xiddigii ugu horreeyay ee Shola Shoretire ka dib markii da’yarka uu saftay kulankiisii ugu horreeyay ee kooxda Manchester United Axadii, isagoo sheegay in rabitaanka kooxda ee ah inay gacanta ku dhigto fursadaha xiddigaha da’da yar ee DNA-da.
Shoretire, oo xiran No. 74, wuxuu noqday wax soo saarkii ugu dambeeyay ee akadeemiyada ee ka qalin jabiyay heerka sare ee Old Trafford markii uu kubad u ciyaarayay qeybtii labaad ee ciyaarta Ole Gunnar Solskjaer kulankii Red Devils ay 3-1 kaga badiyeen Newcastle Premier League.
17-jirkan ayaa raacay talaabooyin dhowr ah oo kale oo da ‘yarta United ah oo fursad u siisay inay ku iftiimiyaan sanadihii ugu dambeeyay marxaladaha waa weyn, oo uu ku jiro Rashford laftiisa, weeraryahankuna si dhakhso leh ayuu u amaanayaa saaxiibkiisa kooxda iyo qaabka kooxda. maaraynta kartida da’da yar.
“Waxay ku jirtaa DNA-gayaga, waa waxa aan ku sameyno Man United,” weeraryahanka England ayaa yiri markii la weydiiyay ciyaarta ka dib. \_”Waa muhiim in carruurteenu ogaadaan markay kufiican yihiin, [way ogyihiin] inay da ‘weyn yihiin.
Shola ayaa inbadan nala tababarayay, runtiina si fiican ayuu u shaqeeyay, [tani] waxay ahayd tillaabada xigta.
“Daaqadii ugu dambeysay ee suuqa kala iibsiga waxaan u ogolaanay ciyaartoy dhowr ah inay amaah ku baxaan, taasoo wadada ka dhigtay mid gaaban, waana hubaa inuu ku xasuusan doono shan ama lix daqiiqo garoonka dhexdiisa caawa.
Fursadaan uu ka soo muuqday Shoretire ayaa timid maalmo uun ka dib markii da’yarka kale ee da’da yar Amad Diallo uu qaansaday kulankii wareega 3-aad ee Europa League ee ay la ciyaareen Real Sociedad ka dib markii uu ka yimid Atalanta, taasoo ka dhigtay xiddigii ugu dambeeyay ee u soo baxa kooxda koowaad.
In kasta oo qadka dhexe uusan u muuqan inuu arko ficil muuqda oo horay uga socda ololaha intiisa kale, haddana waxay weli muujineysaa muujinta iimaanka Solskjaer, kaasoo aan wax qarsoodi ah ka sameynin rabitaankiisa ah inuu ka dhex ciyaaro kooxda dhexdeeda markii ay suurtagal tahay.
James Garner, oo hada udub dhexaad u ah xilli ciyaareed dheer oo uu la qaatay Nottingham Forest, Milton Keynes Dons oo fadhigiisu yahay Ethan Laird iyo amaahiyaha Derby Country Teden Mengi ayaa matalaya qaar ka mid ah ciyaartoydii kale ee Norwey ay dhiig ku daatay tan iyo markii uu yimid.
In kasta oo Shoretire uu ka faa’iidaystay maqnaanshahooda si uu boos uga helo kursiga keydka ee United, hadana wuxuu u badan yahay inuu waqti ku qaadan doono xilli ciyaareedka soo socda koox kale, iyadoo Solskjaer uu u muuqdo inuu hubin doono in ciyaartoydiisa ay ku barwaaqoobi karaan khibrad sare.
Previous articleLionel messi iyo kooxo badan oo fariin u direen Ronaldinho.
Next articleJordan Henderson oo ka baqaya inuu seego waajibaadka England kadib dhaawaca gumaarka ee Soo gaaray.